Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars 1.67 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.67 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒဏ္ဍာရီပျံ့ဂိမ်းနစ်မက်စ်ရဲ့ဖန်တီးသူကနေအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကပျံ့ပြိုင်ကားဂိမ်းလာ: နစ်မက် Pro ကို!
အွန်လိုင်း multiplayer mode:
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစစ်မှန်သောကစားသမားဆန့်ကျင်ပြိုင်ပွဲနှင့်အွန်လိုင်း multiplayer mode မှာဦးဆောင်လွှမ်းမိုး! နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော multiplayer mode အကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါဂန္ထဝင်နစ်နှင့်ပြိုင်ပွဲနှင့် PRO မူသောသင်တို့ပြိုင်ဘက်ပြသပါ။
- Two-သေံနှင့်မှုန်သောဆေးသုတ်အရောင်အဆင်း, အရူးသော graphical decals ။
- Rim မော်ဒယ်နှင့်အရောင်။
- Glass ကိုအရောင်။
- Caliper အရောင်။
- ဘီး (Camber) ထောင့်။
10 ရာသီနှင့်စိန်ခေါ်မှုများရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူအလုပ်မှာ MODE ။
- "Daily သတင်းစာ Track" လူမျိုး။
- Slalom ပျံ့။
- Cone Toppling ။
သင့်ရဲ့ပျံ့ကားတစ်စီးကိုရွေးချယ်ပါ, က customize နှင့်ပျံ့နဲ့ပြိုင်ကားကိုစတင်ပါ။ ကနေသင့်ကားအပြင်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ယာဉ်အတွင်းပိုင်းဖြစ်စေ, သင့်ကင်မရာကို Pick နှင့်သင်ပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းပေးပါ။ သငျသညျဂိမ်းပြိုင်ကားများနှင့်မျောကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, နစ်မက် Pro ကို download လုပ်ပါ - ပြိုင်ပွဲကားများနှင့်အတူကားပျံ့ဂိမ်းယခုသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပျံ့ပြိုင်ကားသည် Modes ထဲကတစ်ခုကောက်နှင့်ကတ္တရာကိုမီးရှို့! 2018 ခုနှစ်တွင်ပျံ့နဲ့ပြိုင်ကားအပေါ်ထားပါ။
မှတ်ချက်: Max Pro ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုအပ်ပါဘူးပျံ့! Long ကတိုက်ရိုက်လွှအော့ဖ်လိုင်းဂိမ်း!
သတိပေးချက်: Max Pro ကိုမိုဃ်းတိမ်ဤအချိန်တွင်အင်္ဂါရပ်ကိုကယ်တင်ရှိသည်ပါဘူးလွင့်မျောနေသော။ အားလုံးဂိမ်းတိုးတက်မှုနှင့် In-app ကိုဝယ်ယူမှုဂိမ်းကိုပယ်ဖျက်အပေါ်သို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဂိမ်းရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးလိုကျနာနိုငျသညျ။
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars အား အခ်က္ျပပါ
pcjc2006 စတိုး 2.86k 745.3k
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.67
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.iubenda.com/privacy-policy/82493774
App Name: Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars
Release date: 2019-03-15 18:14:04
လက်မှတ် SHA1: 9F:A1:6B:F1:16:04:0E:9E:1E:23:C3:3C:F8:A8:09:9F:99:9B:DA:B1
အဖွဲ့အစည်း (O): Tiramisu
Drift Max Pro - Car Drifting Game with Racing Cars APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ